Theater - Zvinyorwa Nhau | Zvinyorwa Nhau (Peji 2)
Albert Espinosa munyori anozivikanwa wechiSpanish, munyori wemitambo, munyori, mutambi uye director. Huya, ziva zvakawanda nezvake nebasa rake.
Yerma, pamwe neBodas de Sangre neLa casa de Bernarda Alba, vanoumba mukurumbira we "Lorca trilogy". Huya, dzidza zvakawanda nezve basa uye munyori waro.
Meya weZalamea, chimwe chezvimiriri cheCalderón de la Barca muGolden Age.Huyai, dzidzai zvakawanda nezvebasa nemunyori waro.
Mukadzi wemambakwedza chidimbu neSpanish Alejandro Casona. Muenzaniso we "dramaturgy senzira yekunyora." Uya udzidze zvakawanda nezve basa uye munyori waro.
Kukosha kwekuva Ernest yaive yekupedzisira komedhi yeIrish munyori wemitambo Oscar Wilde. Huya, ziva zvakawanda nezve basa uye munyori waro.
Muchinyorwa chanhasi tinopa pfupiso pfupi ye "Nhoroondo yesitepisi" naAntonio Buero Vallejo achiperekedzwa nemamwe mazwi ake akanakisa.
Isu tinoongorora mutambo "Pedro y el Capitán". naMario Benedetii, umo mairi protagonists ane dzimwe nhaurirano dzakasiyana. Kupinda.
Mitambo yeCalderón de la Barca chiratidzo chematafura ari munyika. Huya udzidze zvakawanda nezve uyu munyori weSpanish Golden Age nepeni yake.
Molière akazvarwa pazuva rakafanana nanhasi muna 1622. Kuti ndirangarire uyu mukuru weFrance theatre ini ndinogovana chakakosha chidimbu chakasarudzwa kubva kubasa rake.
Uyu mutambo wakakwidziridza iyo genre genre mukati menguva dzakaoma muSpain neEurope. Huya udzidze zvakawanda nezvake uye nemunyori wake.
Musi waNovember 28, Pedro Muñoz Seca akashaya. Mukurangarira munyori weCadiz ini ndinosarudza mamwe mavhesi kubva mumhanzi wake ane mukurumbira, kutsiva kwaDon Mendo.
Hunyanzvi hwaLope de Vega haurambike, akanyatsopinda mukati meguta renguva yake. Chakavanzika chake: kureruka. Uyai muzive chikonzero chezita rake remadunhurirwa.
Nhasi uno mucherechedzo mutsva wekuzvarwa kwemukurumbira wemutambi wemitambo weAmerica Tennessee Williams. Ini ndinosarudza zvimwe zvidimbu zvemabasa ake.
Calderón de la Barca naAnne Brontë vanogovana zuva rekuzvarwa
Nhasi maviri makuru mavara ekuverenga anogovera mazuva avo ekuberekwa: Pedro Calderón de la Barca naAnne Brontë. Ndinoyeuka ndangariro yake nedzimwe nhetembo nezvimedu.
Pane chirangaridzo chekuzvarwa kwaCarlos Arniches ndinorangarira chimiro chake achiratidza vamwe vake vane mukurumbira sainetes uye anoshanda nezvimwe zvidimbu.
"Cyrano de Bergerac", naEdmond Rostand, mutambo wemitambo mumitambo mishanu, yakanyorwa muvhesi, uye inorondedzera hunhu nehupenyu hwemunhu anopa mutambo zita rake Ndiani, kana chii chinomiririrwa nemuzivi uyu, mudetembi, uye nemunondo?
Muchinyorwa chanhasi tinokupa pfupiso yemutambo "La casa de Bernarda Alba" naFederico García Lorca, mutambo wemitambo.
Icho chiyeuchidzo chitsva chekuzvarwa kwemumwe wevakuru kwazvo munhoroondo yevanhu, Julius Caesar. Takaongorora mabhuku manomwe nezvake.
Muchinyorwa chanhasi, rimwe remasikati eValentine's Day, tinokuunzira ongororo pfupi yebasa raJosé Zorilla, "Don Juan Tenorio".
Nhasi tinoongorora muchidimbu mutambo "La Celestina, inonyanya kukosha uye yakakosha yezana ramakore rechiXNUMX.
«Sei avo vakatuka mhere, Don Juan! Asi mheni yakaipa yakavaparadzanisa kana ...
Don Juan Tenorio anodzosera rimwezve gore kune Vatsvene Zuva. Takatarisana netsika dzakatengwa kunze, iyo yechiSpanish yakasarudzika inongoramba ichikundwa nerudo.
PaInternational Theatre Day tinoswedera padyo neAgatha Christie yemitambo kuburikidza nemutambo wake 'La ratonera' uye theatre adaptation of 'Diez Negritos'
Nhasi tinonyora zvimwe zvezviratidzo zvinoshandiswa naLorca mune rake basa La Casa de Bernarda Alba
Ongororo nevanyori vakuru veSpanish comic theatre yezana ramakore rechimakumi maviri
Aloja, chinwiwa chemitambo yemitambo yeGolden Age
Kunyange tinto de verano, kana doro pamatope. Nyeredzi yekumwa mwaka wezhizha, panguva yeGolden Age, yaive lodge, chinwiwa chinotonhorera.